Muuqaaladu si toos ah uma awoodi karaan inay diyaar u noqdaan nashqad. Waxaan helaa fariin qalad ah markaad fureyso P3D
Su'aalaha ku saabsan simulatorada, iskudarka iyo bogga
Isticmaalayaasha cusub ee vvnUMXD v3: Ka dib isbedelka gu'ga ee Scenery.cfg ilaa UTF-4LE rakibayaashu ma awoodaan inay si toos ah u awoodaan muuqaalkaaga.
Xalalka ku-meel-gaadhka ah: Fur furka C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 kadibna fur feylka Scenery.cfg qoraalka Notepad kadibna riix File - Save As ... Daaqada furaysa UTF-8 oo ku yaal meerinta Falanqaynta (fiiri sawirka hoose) oo guji Save
Dib u rakibi muuqaalka iyo voila.
Fadlan waa in lagu soo celiyaa rakibaad kasta oo dabacsan sababtoo ah P3D dib-u-kaydin faylka Scenery.cfg ee UTF-16LE ka dib furitaan kasta.
Xaaladuhu waxay ku dareen ka dib Sebtember 6, 2017 saamayn kuma yeelan arrintan.
Waxaan cusboonaysiineynaa rakibidda gawaarida ee meel kasta oo muuqaal ah, dhibaatada si dhakhso ah ayaa loo saxayaa, laakiin waqti ayay qaadaneysaa.
on Khamiista September 07 by rikoooo